Kenya diyaarinaysa weerar lagu qabsanayo Beled-Xaawo [XOG] | KEYDMEDIA ONLINE
Kenya diyaarinaysa weerar lagu qabsanayo Beled-Xaawo [XOG]
Xiisadda diblomaasiyadeed ee labada dal ayaa cirka isku shareertay dhawaan kadib booqashadii Muuse Biixi ee Nairobi.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda Soomaaliya ayaa soo saartey qoraal ay ku sheegtay inay heshay xog ku saabsan inay Kenya Malleeshiyaad iyo Hub aad u badana y geysay Mandheera, si loogu weeraro Beled-Xaawo oo dhawaan la wareegay Ciidamo laga diray Muqdisho.
Waxay DF sheegtay inay Kenya wado ficillo dagaal sababi kara, islamarkaana wax u dhimaya xasiloonida gobolka Geeska Afrika, waxayna shaacisay inay qaadeyso tallaabo kasta oo ay ku difaacayso madaxbanaanidda siyaasadeed ee Soomaaliya.
Waxay eedeyntan kusoo beegmaysaa xili berri lagu wado in IGAD ku yeelato Jabuuti Shir gaar ah oo looga hadli doono xiisadda diblomaasiyasadeed ee Kenya iyo Soomaaliya, waxaana ka qeybgalaya Madaxweyne Farmaajo. Lama hubo inuu Uhuru tagi doono madasha.
Kenya ayaa taageeraysa Axmed Madoobe, oo isku dayaya inuu awood Ciidan ku qabsado degmooyinka Gedo ee DF kala wareegtay xili uu jira Khilaaf u dhaxeeya isaga iyo Farmaajo kaasoo ku qotoma kuraasta taalla Jubbaland iyo cida maamulaysa doorashadooda.
HALKAN HOOSE KA AKHRI WAR-SAXAAFADEEDKA: